(tonga teto avy amin'ny Mosikao)
Araka ny fanisam-bahoaka natao tamin'ny 2008, 10 382 754 ny isan'ny olona tany Môskao. Ny faminavinana natao ho an'ny taona 2007 dia mampiseho fa efa nihoatra ny 12 tapitrisa ny isan'ny mponina. Kanefa io isa io tsy manisa ny olona tsy manana alànana mipetraka sy ny gastarbeiter miaina any an-tanàna. Avy any amin'ny Kaokazy (Azerbaijana, Armenia, Jeorjia) sy Azia Ampovoany (Kazakstana, Ozbekistana, Tajikistana) ny ankabeazan'ny olona miaina any. Misy ihany koa ny mponina avy amin'ny firenen'ny URSS taloha.
I Môsikao dia anisan'ny tanàna manana fitomboana tsy mihemotra any Rosia : tamin'ny 2006, +0,22% ny fitomboany. Ny taham-pahaterahana tamin'ny 2006 dia 9,2‰ ary ny taham-pahafatesana dia 12‰. Kely ny elanelan'ny taham-pahatrerahana sy ny taham-pahafatesana any Môsikao noho ny any an-tsisan'i Rosia : -0,28% any Môsikao ary -0,48% eran'ny firenena. Ny antony mampiakatra ny isan'ny mponin'ilay tanàna dia izao : betsaka ny olona avy any amin'ny tanàna hafa. Ary ny pôlitikan'ny governemanta koa no mampiakatra azy io. Efa nidina betsaka mihitsy ny fahafatesana ary niakatra fito taona ny salan'ny halavam-piainana any Môsikao.
Ny tanàna[hanova | hanova ny fango]
Ny Federation Tower no ho trano mijoalajoala avo indrindra any Eoropa. Ho tapitra amin'ny faran'ny 2010 ny fanamboarana. Mety ho resin'ny Russia Tower ny Federation Tower amin'ny 2011, 650 metatra ny haavony (nijanona tamin'ny Aprily 2009 ny fanamboarana ny Russia Tower noho ny fisian'ny krizy ara-teo-karena). Ho betsaka ny trano hijoalajoala sy ny toeram-barotra ary ny centre aquatique ao. Ho ao amin'ny faritanàna ao koa no hisy ny trano fandrindrana an'i Môsikao, sy ny trano avo ipetrahana.
Ny toe-tany[hanova | hanova ny fango]
Matetika mipetraka anaty trano efitra kely ny olona mipetraka any, nomena tsy andoavam-bola ireny trano ireny tamin'ny taonan'ny Sovietika na tamin'ny taona 1990, miampy amin'io koa ny hamoran'ny service publics sy ny hetra 13%, mampidina ny vidin'ny fiainana any an-drenivohitra izany politika izany.
Tamin'ny taona sovietika, mandeha arakaraky ny m²/olona ny hofatrano. Mety mahazo bonus ny olo-malaza. Voafetra ny harena tamin'ny andron'ny sosialista.
↑ ((fr)) http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17339907
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môsikao&oldid=978578"
Tanàna ao Rosia
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2019 amin'ny 13:59 ity pejy ity.